Iincwadi eziphakanyisiweyo - iSiseko soMvuzo
Ikhaya Resources Iincwadi ezikhuthaziweyo
Sisoloko sincoma incwadi kaGary Wilson "Ubunjani bakho kwi-Porn-Internet Pornography kunye neSayensi yezoLungisa"Kuba libeka isayensi ephambili kule ndawo. Kubaluleke kakhulu ukuchaza ukuphuhliswa kwengqondo yobutsha ngendlela efikeleleke ngokupheleleyo kwaye igcwele amabali amahle ngabantu abasebenza ekuphumeni. Yakha kwintetho yakhe ephumelelayo ye-TEDx I-Big Porn oye waba nemibono ye-9 yezigidi kwi-YouTube kwaye yaguqulelwa kwiilwimi ze-18.
Iprofesa yaseStford ephuma kwintlalo yengqondo, uFilipu Zimbardo (eStanford Prison Experiment) uye wasebenza noNicita Coulombe ukuvelisa incwadi enhle kakhulu ebizwa ngokuba Indoda yaphazanyiswa- Isizathu sokuba Abafana abaDala bazabalaze kwaye sinokwenza ntoni ngayo. Ukwakha kwintetho yakhe encinci kodwa i-TED, Ukuditywa kweeGay, UZimbardo noColombe bavele ezentlalo, ezoqoqosho nezendalo abenza amantombazana namhlanje kwaye abaqhubela kwimiphumo elula efumaneka kwi-intanethi.
Ukuba uyithandile ifilimu ye-cartoon ngaphakathi ngaphakathi, uya kuthanda oku phambili kodwa nangona kunjalo si khokelo elula ngundoqo neurochemicals eziphembelela indlela esiziphatha ngayo nemikhwa yethu. Yi Imichimo Yobomi Obonwabileyo, Khubaza Ubunzima Bakho Ukukhuthaza I-Serotonin Yakho, i-Dopamine, i-Oxytocin kunye nee-Endorphin Levels nguDkt Loretta Graziano Breuning. ULortta wamkela ngomonde isimemo se-TRF sokuthetha kwi-Melting Pot, e-Edinburgh ngoJuni. Igumbi lalipakishwe kwaye intetho yayifumene kakhulu.
Setha kwakhona ubunjani bomntwana wakho-Isicwangciso seeveki ezi-4 sokuQeda iiMeltdowns, Ukuphakamisa amaBakala, kunye nokuNyusa iZakhono zeNtlalo nguDr. Victoria Dunckley, umntwana wengqondo. Ucinga ukuba i-80% yabantwana abonileyo ayinayo ingxaki zempilo yengqondo (njenge-ADHD, ukudakumba, uxhalaba njl.) Baye bafumanisa ukuba banayo kwaye baxiliswa. UDkt. Dunckley ufumene ukuba emva kokuba i-3 kwi-4 yeveki ikhutshwe ngokukhawuleza iimpawu 'ze-electronic screen syndrome' zinciphisa okanye zinyamalalala kwiimeko ezininzi. Ubeka inzululwazi kunye necala eliphosakeleyo kwi-detox ye-digital.
Le yeencwadi ezimbini zomnye ugqirha onamava waseMelika, uRob Weiss, uLCSW, CSAT-S. Sifunde lukhulu ku Ukwabelana ngesondo ngo-101-Isikhokelo sokuPhulukisa kwiSondo, i-Porn kunye noThando loTywala. Inayo iqabane Isikhokelo se-Workshop 24 Exhibises Exercises ukukhokelela ukuThengiswa koTywala. Wenze umsebenzi omkhulu kunye LGBT + Kuluntu.
Ukuba u-psychotherapist okanye umcebisi osebenza kwiinkcukacha zoononografi ze-intanethi ngokukodwa kunye Abaselula unokuba nomdla kwincwadi ethi "Indlela yokubuyisela kwi-Cyber ​​Pornography Addiction-I-Youth Teber Cyber ​​Workbookbook"NguChristopher Mulligan LCSW. U-Mulligan ungumhlengikazi waseMerika owaziwayo obeka inkqubo yokubuyisela kweveki ye-16. Incwadi epapashwe ngabanye kwaye inomxholo ombalwa kodwa ngaphandle koko uncedo olukhulu. Idibanisa imfundiso yeengcali entsimini njengokliniki uDkt Patrick Carnes kunye nabafundi uDkt David Delmonico noDr Elizabeth Griffin.
Ukwabelana ngesondo, ukuthandwa kunye neMidiya yokuNxibelelana-Ukuthetha nabakwishumi elivisayo kwiDijithali ngu-Allison Havey noDeana Puccio, (waseMelika kodwa asekelwe eLondon) abasunguli beProjekthi ye-RAP. Le ncwadi efundeka kakhulu oomama ababini I-5 intsha kunye neengcebiso ezisebenzayo kubazali abaphila ngokwenene ebusheni bomtshato namhlanje. Baye bathetha iintetho ezikolweni malunga nefuthe le-intanethi ngokuziphatha kwentsha kunye nentlalo-ntle.